Ajụjụ - Ningbo WEDAC Point of Sale Display Co., Ltd
NBN-ịchọ mma ika Australia
Td Display Pusher maka Vitamin Box
Automatic Self-ịkwa System Ngosi
ịchọ mma Guzosie
ịchọ mma Display
Yi Acylic Display
ịchọ mma ogbe
Ngosipụta mkpịsị akwụkwọ
Ọzọ Ihe Display
Price labelụ njide maka nko
ịkwanyere kaadị njide
ịrịba ama gripper
Ọgwụ kpụrụ Part
Sistemụ Pusher nkeonwe
Drug onwe-akpaka pusher ngosi
Eme na-elu onwe-akpaka pusher ngosi
M nwere nanị ụfọdụ foto nke ngosi, nwere ike ị na-enye anyị kwuru? Ọ bụrụ na, ihe ọzọ ị ga-achọ?
Ndo anyị nwere ike see okwu dabeere na dị nnọọ a na foto a, ọ dịghị ihe ọzọ dị anyị mkpa n'ihe ọ bụla Ọdịdị, ọkpụrụkpụ na àgwà ndị a chọrọ maka na ihe onwunwe, nke ukwu chọrọ, nkọwa maka ya ojiji, na ọmụma nke ngwaahịa nke mkpa na-egosipụta.
M nwere a osisi, ọ bụ na-ezu?
Ok, ma, biko akara yiri ka akowaputara dị ka o kwere: mmesho and explanation, thickness and quality requirements for the material, quantity required,the description for its usage, and the information of the product which need to be displayed.
M nwere a echiche imewe
Ok, ma biko mara na yiri ka akowaputara dị ka o kwere: mmesho, ọkpụrụkpụ na àgwà ndị a chọrọ maka na ihe onwunwe, nke ukwu chọrọ, nkọwa maka ya ojiji, na ọmụma nke ngwaahịa nke mkpa na-egosipụta
M nwere nghọta
Nke ahụ ga-abụ ihe kasị mma, na ọ bụrụ na ndị na-esonụ ozi ga-abụ dị, ọ ga-zuru okè:
The ngwaahịa nke mkpa na-egosipụta
osise ma ọ bụrụ na ọ bụla labelụ graphic wet / akwụkwọ, decal ma ọ bụ na-ebi akwụkwọ na-etinyere.
Pantone agba nọmba maka silkscreen obibi akwụkwọ.
Gịnị ka m kwesịrị inye ma ọ bụrụ na m mkpa a ngosi na-ahaziri?
Biko-enye ndị na-esonụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ a ahaziri ngosi unit:
1. The ibu ikekwe nke gị mbụ iji.
2. A zuru ezu set nke teknuzu Eserese ga-kacha mma n'ihi na anyị na e kwuru, mmepụta ma ọ bụ na-aghọta gị chọrọ.
3. Ọ bụrụ na ị na-adịghị na ụzụ na ịbịaru, a echiche (imewe) osise nke mmetụta (ma ọ bụ ọbụna a osisi) na oké egwu nha na nkọwa ga-adị irè.
4. The nkọwa nke gị ngwaahịa na-egosipụta na ngosipụta unit: Ọdịdị, size, arọ, ihe onwunwe, picture wdg, n'ihi na anyị kwesịrị chepụta / nwalee ngosi dabeere na nkọwa nke ngwaahịa, a zuru set nke samples of gị ngwaahịa a ga-achọ iji nwalee ngosi unit tupu anyị chee na ị a ikpeazụ sample.
5. Ọ bụrụ na gị ngosi mkpa ka a na-etinye na shelves, biko nye anyị ihe-nkọwa nke shelf: Ọdịdị, size, onu ọnọdụ maka eletrik, ihe onwunwe, picture wdg
Gịnị ọmụma dị mkpa n'ihi na a kwuru, na ihe bụ ihe ndị bụ isi dị mkpa ọmụma ga-abụ maka a kwuru?
1. Anyị mkpa n'ihe ọ bụla Ọdịdị nke ọ bụla,
2. ọkpụrụkpụ na àgwà a chọrọ maka ihe onwunwe,
4. wụnye gburugburu ebe obibi na nkọwa
5. ibu chọrọ,
6. nkọwa maka ya ojiji, na ọmụma nke ngwaahịa nke mkpa na-egosipụta.
7. mbukota nkọwa
8. osise ma ọ bụrụ na ọ bụla labelụ graphic wet / akwụkwọ, decal ma ọ bụ na-ebi akwụkwọ na-etinyere.
9. Ahịa isi ozi, kọntaktị
10. Price okwu
Olee otú anya m ga-esi na-price (e kwuru)?
1. Ọ bụrụ na akowaputara Eserese na-nyere, ma ọ bụ ihe ọmụma zuru ezu na-niile dị maka kwuru , na-emekarị anyị nwere ike inye price n'ime 2 ụbọchị, ga-enye e kwuru n'oge ọ dị ka n'ezie ọnọdụ nke ndị ọrụ.
Ọtụtụ ihe ma ọ bụ siere ihe iri dịtụ ogologo oge.
Basic price (na-enweghị mbukota nkọwa, ma ọ bụ ex-arụ ọrụ price) nwere ike ịbụ na-eweta mee elu mee.
Complete kwuru (na mbukota nkọwa, ibu ibu, ụzọ oge maka sample na mmepụta wdg) ga-dịtụ ogologo oge.
2. Ozi bụghị zuru ezu, e kwuru nwere ike na-enweghị nghọta, quote n'ime 3 ụbọchị.
3. Mkpa ka imewe mbụ na-enye e kwuru, na-emekarị na-achọ 1 izu na-enye ndị e kwuru . Ga-enye e kwuru n'oge ọ dị ka n'ezie ọnọdụ nke ndị ọrụ.
Gịnị bụ isi ngwaahịa na ị nwere ike na-emepụta?
Acryli ngosi, ngosi guzoro, ngosi kabinet, ịchọ mma ngosi, shelf pusher, PC ngwaahịa, PETG ngwaahịa wdg
Olee ihe ọzọ i nwere ike na-enye?
Plastic ngosi, Ọgwụ na ngwaahịa, ịkwanyere extrusion, ịkwanyere njide, osisi ngosi, metal ngosi wdg
Gịnị bụ MOQ nke WEDAC mmepụta?
Clear acrylic ngosi: 100pcs
Yi acryli ngosi: 500kgs
Mpempe akwụkwọ metal ngosi guzoro: 100pcs
Agbara plastic ngosi: 1000pcs
Gịnị bụ na-emebu mbukota ụzọ dị iche iche na ngwaahịa?
1. General mbukota: 1pc / Pee akpa / n'ime igbe, ọtụtụ PC / katọn, ma ọ bụ Ọtụtụ PC na a n'ime igbe, mgbe ahụ, N igbe ke otu katọn ..
2. Bulk mbukota: N PC na a katọn, ụfọdụ infilling.
3. n'ụgbụgbọ mmanụ aṅụ katọn, osisi crate, osisi mgbe, ụfụfụ n'echebe, osisi pallets, plastic pallets wdg maka nhọrọ.
Gịnị ugwo nhọrọ anaghị WEDAC na-anabata?
WEDAC anabata ugwo nke na-esonụ:
1. T / T 50% n'ọdịnihu dị ka ego, na itule mgbe ndeputa B / L.
2. LC na anya
3. Ndị ọzọ ụgwọ ụzọ-atụle na inyocha dị ka kwa zuru ezu ọnọdụ.
Ụzọ oge maka sample na uka mmepụta: Sample 3-15 ụbọchị, Mass mmepụta 15-50 ụbọchị.
Mmebi ụbọchị nke a kwuru: emekarị n'ime ụbọchị 30 naanị.
Ịlele enye eri:
Uru ≤10 dollars, free, ma obu ozi ụgwọ ga-akpata site na asịwo.
Uru> 10 dollar, Sample eri = unit price x 3 + ozi ụgwọ ga-akpata site na asịwo.
Ọ bụrụ na ngwaahịa mkpa imeghe ebu, sample eri mkpa na-agụnye ebu na-eri.
Na asịwo nwere ike iji T / T, Paypal, n'ebe ọdịda anyanwụ n'otu, moneygram, & ụzọ ọ bụla na-eme ka ugwo maka sample-eri.
Your price dị elu:
Ee, ma eleghị anya, anyị price dị elu karịa ụfọdụ ndị ọzọ, n'ihi na ọ dịghị mgbe anyị na-eji usụhọde ihe ma ọ bụ bee nkuku na-esi sub-ọkọlọtọ ngwongwo, ọ dịghị mgbe anyị belata àgwà nke ọrụ anyị na-belata na-eri nke anyị ngwaahịa, anyị na-achọghị ka emebi ahịa nke anyị ahịa na ihe ọjọọ na ngwaahịa, anyị na-atụ anyị ahịa na anyị nwere ike na-erite uru ọnụ na ibe azụmahịa.
Ike gị hotara price ga-negotiated ma ọ bụ belata?
Ee, n'aka, ma ọ bụrụ na ndị qty., Spec. ma ọ bụ okwu & ọnọdụ wdg ga-gbanwee, ma ọ bụ zuru ezu ibe nghọta na-ike.
Gịnị banyere sample adịghị mma?
Anyị ga mezie na-enye ọhụrụ sample ọzọ n'efu.
M nyere iwu. Ugbu a ihe?
Anyị ga-imelite gị na mmepụta ọnọdụ foto ndị si mmepụta ihe. Anyị ga-eso elu mmepụta usoro na àgwà ngwaahịa, jide n'aka na ihe niile izute gị quality ọkọlọtọ, jide n'aka na ọ dịghị ihe na-ezighị ezi tupu ngwongwo ahapụ anyị factory! ...... .Jeta i nwere ike na-atụ anya na-enweta ngwongwo nyere iwu mgbe mmepụta oge (kwuru na iji) na mbupu oge (site oké osimiri ma ọ bụ ikuku).
Ị ga-imelite anyị mmepụta ọnọdụ na foto mgbe wee dọba?
Ee, n'aka. Anyị ga-eso elu usoro nke mmepụta na-ị na-emelite.
Olee otú ị ịchịkwa àgwà nke na ngwaahịa?
Anyị nwere 3 QCs, ha inyocha ihe niile ma na-adị kwa ụbọchị, ọ bụla ngwaahịa ga-nyochara na oké egwu ogbo, dị ka, na akụrụngwa, ọkara ngwaahịa, okokụre ngwaahịa, mbukota etc ..
Gịnị banyere mbupu na njem? Ị nwere a pụrụ ịdabere na mbupu gị n'ụlọnga ma ọ bụ forwarder?
Ee, anyị nwere pụrụ ịdabere na mbupu gị n'ụlọnga & forwarder-arụ ọrụ na anyị ruo ọtụtụ afọ, ha nwere ike mgbe niile-anapụta ngwongwo gị ọdụ ụgbọ mmiri ahụ n'enweghị nsogbu.
Ọ bụrụ na anyị na-eme FOB, i na-anabata ẹkedọhọde forwarder?
Ee, ma ihe forwarder mkpa ka a mma site anyị kwa tupu anyị akwụkwọ ohere na ha, bụrụ na ndị forwarder nwere ezi uche ụgwọ anyị ma ọ bụ anyị hụrụ nsogbu na ha, anyị nwere ikike na-arịọ ka ịgbanwee a ezi uche onye, ​​ma ọ bụ nwere ike ikwu ndị dị otú ahụ otu maka gị.
Gịnị banyere mbupu akwụkwọ?
N'ozuzu anyị ga-enye akwụkwọ ọnụahịa, mbukota ndepụta na akwụkwọ ngwaahịa dị ka mbupu akwụkwọ, ma ọ bụrụ na asịwo mkpa ọ bụla ọzọ akwụkwọ, biko mee ka anyị mara tupu.
Mgbe na-anata ngwongwo, ma ọ bụrụ na mmebi ma ọ bụ ntụpọ na ngwaahịa na-hụrụ, gịnị ka anyị kwesịrị ime?
Biko foto na-eziga ka anyị ozugbo, anyị ga-eji dochie ya na-esonụ Mbupu.
Ọ bụrụ na m na-edebe megharịa iji, nwere ike na-price enwe obere ma ọ bụ nanị na-ahụ dị ka ndị mbụ iji?
Anyị ga-enyocha ndị price dabeere na ọnụego mgbanwe nke ego na ihe onwunwe / ọrụ na-eri n'elu-anata megharịa iji, na-eme ka ukpụhọde ya.
Ị factory / emeputa ma ọ bụ dị nnọọ a trading ụlọ ọrụ?
Anyị bụ ndị emeputa ma anyị nwekwara ike ime trading ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Olee otú ọtụtụ ndị ọrụ na ngụkọta na gị ụlọ ọrụ?
E nwere 25 na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Gịnị bụ gị mmepụta ike?
About USD500000 maka ngosi mmepụta ugbu a, ma anyị nwere ike ịgbatị anyị mmepụta ike ngwa ngwa.
Gịnị bụ gị ugbu a na-ahịa olu?
USD3 Ọtụtụ nde kwa afọ.
Ntak-ahọrọ acrylic ngosi?
1. N'oge World Wall Ⅱ 1939-1945, dị ka a pụrụ iche plexiglass, acrylic e apụ ọtụtụ mee dị ka windshield agha ụgbọ elu na tankị, na òfùfè-ya ndụ ihe karịrị afọ 10 n'okpuru oké gburugburu ebe obibi.
2. acryli nwere nnukwu ogo nghọta, na ọnụego nke ìhè nnyefe bụ ruo 92-93% --- elu karịa iko! Ya mere, ọ nwere aha nke "plastic crystal".
3. Ya ìhè anya adụ, ala, na-ghar (dị ka diamond)!
4. Ọ nwere magburu onwe weather eguzogide, epically n'èzí, ogo n'elu na plastic. Good arụmọrụ elu okpomọkụ, distortion okpomọkụ gburugburu 96 ℃ ( 1.18MPa ) . Good weather eguzogide, acid na alkali eguzogide, dịghị onu nke yellowing na hydrolysis mgbe afọ nke ikpughe n'okpuru anwụ na mmiri ozuzo.
5. Long arụmọrụ ndụ: jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ (dị ka PS, AS, eyi wdg), afọ atọ ogologo arụmọrụ ndụ!
6. Magburu onwe mgbochi merela agadi arụmọrụ na ikuku: nlele nnwale nwalere na: mgbe 4 afọ nke eke ịka nká, , acrylic ngwaahịa ibu nká, , ike nke ndinyanade mbịne, na ìhè transmittance belata a nta nká, , na agba amama a obere acha nká, , crazing eguzogide belata anya, Otú ọ dị, mgbochi mmetụta arụmọrụ mụbara na n'ọnọdu, na ndị ọzọ physic arụmọrụ fọrọ nke nta ọ bụla mgbanwe!
7. Ọ nwere nnukwu ogo elu ekweghị ekwe na gloss,
8. Ọ magburu onwe & pụtara ìhè Ụgha arụmọrụ, nwere ike kpụrụ site na okpomọkụ, na-ike-esichara site n'ibu machining.
9. acryli nwere ike n'ime a dịgasị iche iche nke shapes na ngwaahịa mkpa. Onye pụtara ìhè mma bụ ịnọgide elu ogo nghọta na elu ogo ọkpụrụkpụ.
10. fechaa, cheapness, mfe enwe mmetụta.
11. na acrylic ihe nwere enweghị atụ elu ogo ihie nakwa dị ka ndị na-esonụ uru: ọma ike, ọ dịghị mfe mebiri emebi; repairable; ya nwere adụ udidi, na-enweghị bit oyi na oyi. Ọ nwere ọtụtụ na agba, nzute dị iche iche chọrọ. Ngwaahịa mere na acrylic, na-abụghị nanị na-atọ, ma na-adịrị.
1) ya radieshon yiri na mmadụ si ọkpụkpụ.
2) Waste ihe ike ike itighachi maka iwerekwa, imegharị ihe maka iji dị mfe na-adaba adaba.
3) High Recyclable ọnụego, Mee gburugburu ebe obibi mmata bụ esiwanye
4) Ọ dịghị ize ndụ monomer ma ọ bụ ịnụ ísì ga-atọhapụ.
5) Food nchekwa, ọ dịghị nsogbu ka ahụ mmadụ.
13. Energy azọpụta: Good ogo nke ìhè nnyefe, ruo 92-93%, obere ìhè siri
chọrọ, na-ebelata ọkụ, ike na-azọpụta, na-azọpụta ike na-eri.
14. Strong mmetụta na-eguzogide, iri na isi ugboro karịa nkịtị iko, adabara echichi na a mma mpaghara n'ihi mkpa pụrụ iche.
15. Good mkpuchi arụmọrụ, adabara a dịgasị iche iche nke ọkụ na ngwá.
16. Ìhè ibu, ọkara arọ nke nkịtị iko.
17. Yi, elu ogo nchapụta, enweghị atụ ka ihe ndị ọzọ.
18. Strong plasticity, mfe ịkpụzi.
19. Easy ịnọgide na-enwe, mfe ọcha, mmiri ozuzo nwere ike ndammana ọcha.
20. Soft udidi, na-eche ọ bụghị otú ahụ oyi ka iko ma ọ bụ seramiiki n'oge oyi.
21. Bright na agba, izute onye ịchụso maka àgwà nke ndụ.
22. Magburu onwe arụmọrụ bipụtawa ma ọ bụ mkpuchi, ma ọ bụrụ na-eji mma-ebi akwụkwọ ma ọ bụ spraying mkpuchi technology, ọ nwere ike inye acrylic ngwaahịa ezigbo elu mma mmetụta & ele ihe anya.
23. Good ntachi obi, yiri na aluminum, ezi kwụsie ike na ọgwụ, ike die ozize nke ọtụtụ chemical bekee.
24. finely nchebe esịtidem ọkụ, ịgbatị ọrụ ndụ nke ọkụ.
25. adịrị ọkụ, free nke n'amaghi combustion na onwe emenyụ.
26 E nwere acrylic ihe onwunwe nke nwere dị iche iche & multiple arụmọrụ, dị iche iche na agba na visual mmetụta, nwere ike izute dị iche iche chọrọ nke ndị ahịa.
27. Kemgwucha visual impacting mgbe kwesịrị ekwesị nhazi, ịchọ mma na-ebi akwụkwọ.
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti acrylic ngosi na ndị ọzọ na ihe onwunwe? Acryli vs Glass
Acryli vs Glass
Na ụlọ ọrụ, acrylic ihe nwere a wider ngwa karịa iko ihe onwunwe, dị ka o nwere ọtụtụ uru n'elu iko ihe onwunwe.
1. Na akụkụ nke nhazi, acrylic nwere ike esichara n'ime ọtụtụ ihe ndị ọzọ ụdị na shapes karịa iko.
2. Ha na-ma na-emebi emebi, Otú ọ dị acrylic ihe onwunwe bụ ihe na-agbanwe karịa iko. Mgbe iko oge izu, ọ na n'otu n'ime nkọ iberibe nke mfe imerụ ndị mmadụ; mgbe acrylic etịbede n'ime nnukwu, masịrị iberibe, na agaghị egbu ndị mmadụ. Site tụnyere nke abụọ ihe, onye na-ahọrọ na-adịghị emerụ acrylic ihe onwunwe.
3. Ma elu nchekwa nri ọkwa, chemical kwụsie ike nká, , na-atachi obi general ozize nke na, ọ bụghị soluble na mmiri.
4. Visible ìhè permeation nká, , UV nká, , arọ bụ 1/2 nke nkịtị iko.
5. Light permeation ka 92-93% nká, , okporo uzo plastic (PS, AS, ịkwanyere wdg) nwere ìhè permeation naanị a obere ihe karịa 80%.
6. Anti-mmetụta arụmọrụ bụ 12 ~ ugboro 18 nkịtị sịlịkọn iko.
7. Mechanical osisi ike na mgbanwe bụ ugboro 10 karịa nkịtị sịlịkọn iko nká, , ekweghị ekwe yiri aluminum nká, , pụtara ìhè weather-eguzogide ma na merela agadi na-eguzogide.
8. N'ụzọ pụtara ìhè mara mma udidi nká, , nwere crystal-dị ka gloss mgbe polishing nká, , utu aha "Queen of Plastic Crystal".
Acryli vs PS
Differerence n'etiti acrylic ngosi na PS agbara ngosi:
1. The acrylic ngosi ese ihe uzo na cute karịa PS agbara ngosi ogbe, na ọ nwere nnukwu ogo elu gloss, nwere crystal-dị ka gloss mgbe polishing ,; Magburu onwe arụmọrụ bipụtawa ma ọ bụ mkpuchi, ma ọ bụrụ na-eji mma-ebi akwụkwọ ma ọ bụ spraying mkpuchi workcraft, ọ nwere ike inye acrylic ngwaahịa ezigbo elu mma mgbalị & ele ihe anya. Ya mere ọ enweghị atụ pụtara ìhè mara mma ele ihe anya.
2. acryli nwere ogologo arụmọrụ ndụ karịa PS, dịkarịa ala afọ atọ aba ke ọrụ ndụ.
3. The acrylic ngosi ogbe anaghị mkpa na-emeghe ebu, si otú dịghị ebu na-eri ga-ebe, na ya size na Ọdịdị ike ike ahaziri conveniently ọ bụla.
4. Otú ọ dị ndị acrylic ngosi bụ nnọọ elu unit na-eri karịa PS agbara ngosi.
5. PS agbara ngosi ogbe bụ ọtụtụ dị ọnụ ala karịa na unit price, Otú ọ dị ya mkpa na-emeghe na-ebu na mmalite na ya nwere a ebu na-eri na-akwụ ụgwọ ọzọ.
6. acryli nwere nnọọ ike endurability n'okpuru n'èzí na gburugburu ebe obibi, o nwere pụtara ìhè weather eguzogide.
7. acryli nwere ọtụtụ ihe mgbochi-UV arụmọrụ, mgbochi ịka nká arụmọrụ.
8. Ma na-emebi emebi, cracking n'okpuru ala okpomọkụ.
9. PS nwere mma injection arụmọrụ, adabara mmepụta na ọtụtụ buru ibu. Obere shrinking ọnụego maka ngwaahịa, size bụ anụ.
10. PS mgbe ikpughe n'okpuru anwụ, mfe na-atụgharị acha na blurring.
Acryli vs eyi
2. acryli nwere ogologo arụmọrụ ndụ karịa eyi, ọ dịkarịa ala, afọ atọ aba ke ọrụ ndụ
4. Otú ọ dị ndị acrylic ngosi bụ nnọọ elu unit na-eri karịa eyi agbara ngosi.
5. eyi agbara ngosi ogbe bụ ọtụtụ dị ọnụ ala karịa na unit price, Otú ọ dị ya mkpa na-emeghe na-ebu na mmalite na ya nwere a ebu na-eri na-akwụ ụgwọ ọzọ.
6. eyi bụ nro, ọ bụghị dị ka ike na ike dị ka acrylic.
7. eyi si nghọta ike iji tụnyere arylic.
8. acryli nwere nnọọ ike endurability n'okpuru n'èzí na gburugburu ebe obibi, o nwere pụtara ìhè weather eguzogide.
9. acryli nwere ọtụtụ ihe mgbochi-UV arụmọrụ, mgbochi ịka nká arụmọrụ.
Acryli vs PETG
The acrylic ngosi ese ihe uzo na cute karịa PETG ogbe, na ọ nwere nnukwu ogo elu gloss, nwere crystal-dị ka gloss mgbe polishing ,; Magburu onwe arụmọrụ bipụtawa ma ọ bụ mkpuchi, ma ọ bụrụ na-eji mma-ebi akwụkwọ ma ọ bụ spraying mkpuchi workcraft, ọ nwere ike inye acrylic ngwaahịa ezigbo elu mma mmetụta. Ya mere, ọ nwere enweghị atụ & n'ụzọ pụtara ìhè mara mma ele ihe anya.
PETG ' s mgbochi mmetụta arụmọrụ bụ 1-3 ugboro nke ike acrylic , na 3 ~ ugboro 10 nkịtị acrylic. PETG: Ike, mgbochi mmetụta, na-anagideli, ọbụna n'okpuru gburugburu ebe obibi nke okpomọkụ na-erughị -40 ℃ . PETG ngwaahịa ezuru endurability maka fabricatio n, ụgbọ njem na ojiji. Ọ nwere ike na-ezere na-agbasa n'ụzọ dị irè.
PETG nwere ihe magburu onwe ya na-akpụ arụmọrụ, ọ dịghị ọcha mgbe ekwe n'okpuru nkịtị okpomọkụ, ọ dịghị ọcha mgbe oyi na-atụ ekwe, ọ dịghị mgbape, mfe maka ibipụta na mma.
PETG bụ mfe iji na-emepụta na ngwaahịa na siere Ọdịdị na ogologo ndinyanade mbịne.
PETG bụ ọkụ na-eguzogide ọgwụ, ọ na-abụghị nke combustible, na dịghị aka-ere ọkụ, sụgharịa ọkọlọtọ nke-ewu ihe onwunwe, ọ dịghị ize ndụ umi na-emepụta mgbe ere ọkụ, ihe dị mma karịa acrylic.
Anti-UV, nwere ike na-ọtụtụ-eji signages n'èzí ma ọ bụ ime ụlọ, Point of Sale, Display ogbe, N'èzí ngwá, sales ụlọ ntu, na-echebe panel maka equipments, play ebe panel, vending igwe panel wdg
Ọ bụ thermoplastic gburugburu ebe obibi enyi na enyi ngwaahịa, bụghị nwere ndị ọzọ chemical ọcha ma e wezụga C, H, O, ọ bụ ụdị plastic nke bụ ere ure. Ngwaahịa mere nke a na ihe onwunwe mgbe hapụrụ, ha ga-chigharịkwuuru na mmiri na carbon dioxide, Ọ nwekwara ike itighachi enweghị si na-ebibi gburugburu ebe obibi.
PETG bụ oké ọnụ karịa acrylic, ma dị ọnụ ala karịa PC na-anọte aka karịa acrylic.
PETG kwekọrọ n'ụzọ nri kọntaktị ọkọlọtọ nke FDA, ọ nwere ike na-etinyere nri, ọgwụ na ahụ ike na ngwaahịa wdg, ọ ga-eji dị ka mbukota ihe onwunwe ma ọ bụ containers nke dị iche iche nke ihe oriri ...... na ya na-adịru lipids na a ọtụtụ nke na, na-eguzogide ọgwụ na ozize nke acid, alkaline na mmanụ wdg, ọ na-ahuta ka a odi mfe ihe maka nri na ndị mmadụ.
PETG e ọtụtụ-eji na-esi ísì karama na ya lids, ịchọ mma karama na ya lids, akpa nke lipstics, ịchọ mma igbe, deodorizer containers, nwa powder karama, eyeliner na okpu, wdg na PETG injection ngwaahịa: nzacha, eustachian tube, njikọ nke ọkpọkọ , nfuli, Clippers, na dialysis equipments wdg Ezinaụlọ ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka iko, salad nnukwu efere, saltcellar, ose shaker, akụ kaadị, mmiri containers wdg, nke mkpa elu mma chọrọ maka ndị mmadụ.
Acryli vs ịkwanyere
1. ịkwanyere bụ softer, ọnụ ala ma na-emekarị thinner.
2. Piel ịkwanyere ọkpụrụkpụ na-emekarị bụ karịa 3mm.
3. ịkwanyere si nghọta ike iji tụnyere arylic.
4. ịkwanyere bụghị nri mma, ma ọ bụghị na gburugburu ebe obibi enyi na enyi.
5. ịkwanyere-emekarị na-eji ọnụ na acrylic owuwu dị ka a akụkụ nke ngosi.
Acryli vs MDF
Kpamkpam differerent na akụkụ nile: na-ele ihe anya, na nghọta, udidi wdg
Acryli vs Wood
Dị iche iche na ọtụtụ akụkụ, kama ọ bụ acrylic bụ ike ịzọpụta, gburugburu ebe obibi-echebe, Otú ọ dị osisi ga-mkpa mebie ụwa.
Acryli vs mpempe akwụkwọ metal
Iche tumadi-egosi dị ka nghọta, echiche, anwụ ngwa ngwa na ịkwụsi ike.
Acryli vs Efere
Atụnyere na omenala seramiiki ihe onwunwe, acrylic nwere enweghị atụ elu gloss, na o nwere ndị na-esonụ uru: Good mgbanwe, dịghị mfe kenkwusi, mfe a rụzie, eji naanị a adụ ụfụfụ na a bit nke asa ezé, nwere ike hichaa ịdị ọcha na-ọhụrụ.
Soft udidi, bụghị na-eche na oyi na-atụ n'oge oyi.
Bright na agba, nwere ike izute dị iche iche na onye na-achụ maka àgwà ndụ.
Environment enyi na enyi, ọ bụ ụzarị ọkụ yiri mmadụ nke ọkpụkpụ.
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti glued ngosi na agbara ngosi?
Glued ngosi na-adịghị mkpa na-emeghe ebu, na ya Ọdịdị na nhazi nwere ike ahaziri oge ọ bụla na-enweghị mmezi ụgwọ, otú a ka ọ ga-azọpụta a nnukwu ego nke ebu na-eri atụnyere na agbara omume, glued ngosi ka ya agba ezi olileanya atụnyere na agbara n'anya. Mgbe ndị mmadụ na-achọghị itinye ebu na-eri, ma ọ bụ na ngwaahịa bụ adabara ogwu ogbugba, ma ọ bụ ndị mmadụ na-achọghị na-emepụta ọtụtụ ibu maka nlereanya, ma ọ bụ na ndị mmadụ chọrọ ka na-agbalị ahịa na ọhụrụ imewe, glued acrylic ngosi ga-kacha mma nhọrọ. Agbara ngwaahịa mkpa ndị na-azụ itinye ebu na-eri ma ọ bụ a mmepụta iji nke nnukwu ibu, na ozugbo ebu oghere n'ihi na otu onye nlereanya a na malitere, ọ na-apụghị-gbanwetụrụ ma ọ bụ gbanwere ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ nwere ọzọ nlereanya na a "mma" imewe, ị ga-emeghe a ọhụrụ ebu ọzọ ma ọ bụ na-amalite glued acrylic Ụgha.
Na-glued ngosi ike?
Ee, ma ọ bụrụ na ị na-atụfu ha ma ọ bụ na-eguzo na ya, ma ọ bụ jiri acrylic ngosi jide ọla blocks.
Gịnị bụ isi atụmatụ na uru nke glued acrylic ngosi?
Glued ngosi na-adịghị mkpa na-emeghe ebu, na ya Ọdịdị na nhazi nwere ike ahaziri oge ọ bụla na-enweghị mmezi ụgwọ, otú a ka ọ ga-azọpụta a nnukwu ego nke ebu na-eri atụnyere na agbara omume, glued ngosi ka ya agba ezi olileanya atụnyere na agbara n'anya. Mgbe ndị mmadụ na-achọghị itinye ebu na-eri, ma ọ bụ na ngwaahịa bụ adabara ogwu ogbugba, ma ọ bụ ndị mmadụ na-achọghị na-emepụta ọtụtụ ibu maka nlereanya, ma ọ bụ na ndị mmadụ chọrọ ka na-agbalị ahịa na ọhụrụ imewe, glued acrylic ngosi ga-kacha mma nhọrọ.
Gịnị banyere gị mmepe atụmatụ ke nso ga-eme n'ọdịnihu?
Anyị ga ịzụlite a ọtụtụ usoro nke acrylic ngosipụta (ọtụtụ n'ime ha na pusher usoro, na-na ụfọdụ ndị ọzọ ihe ndị dị ka MDF, PC, PETG, mpempe akwụkwọ metal wdg) maka dị iche iche e, dị ka ihe ntecha, pharmaceuticals & ahụ ike na-elekọta ngwaahịa, e-sịga, ihe ọṅụṅụ &-aba n'anya, kwa ụbọchị iri & ihe n'ụlọ wdg, maka ojiji nke merchandising, sample egosipụta, ahịa nkwalite wdg
Anyị ga-aga Globalshop 2015 na Las Vegas na US n'oge Mar. 24-26 nke .
Olee banyere workcraft usoro:
Design ma ọ bụ na-eru auditing → Materials Ịzụta → Laser ịcha → igwe → polishing → okpomọkụ ekwe → Silk ihuenyo ebi akwụkwọ → gluing → gbakọta → nnyocha → mbukota → Mbupu
Gịnị bụ gị bụ isi Equipment?
Laser ọnwụ igwe 5
High ọsọ rawụta 2
Diamond polishing igwe 1
Spindle igwe 1
N'elu planer 1
Ire ọkụ polishing igwe 2
Isiokwu hụrụ 2
Isiokwu osise igwe 1
Nkenke Ihicha oven 1
Okpomọkụ ekwe igwe 4
Ultrasonic ịgbado ọkụ igwe 1
Na ndị ọzọ ......
Ị na-enye ngosipụta maka ihe ọ bụla mba ụdị?
Ee, Loreal, Kaufland, Rimmel, Sally hanson, Napolean Perdis, K-Mart, Big-W, Watsons, Evergreen wdg
Ị nwere QC ngalaba?
Ee, anyị nwere QC ngalaba, 3 QC.
Ime i R & D ngalaba?
Ee, anyị nwere R & D ngalaba, 3 na-emepụta.
Ị na-enye ODM ngwaahịa?
Ee, anyị nwere ọtụtụ ODM ngwaahịa. Kwa ọnwa anyị ga-azụlite dịkarịa ala 2-3 ọhụrụ ngwaahịa na ọhụrụ imewe.
Biko agakwuru anyị sales otu na-arịọ ha kpọmkwem site na email, skype , or telephones!
Ha ga-enye gị ozugbo na ọrụ zara!
anyị a emeputa pụrụ iche na imewe, na-emepe emepe na-amị retail store ngosi ngwá maka iche iche iche iche nke ebe gụnyere ịchọ mma, ahụ ike na-elekọta andE-sịga ọrụ.
Adreesị: Ụlọ 1301, 13/F East ụlọ nke Kemao Center, No. 100 Xiangyun Road, Gaoxin District, Ningbo 315040, Zhejiang, China
Ekwentị: + 86-574-87282738
Hazie gị Product